တပ်ဘက်ကဖမ်းမိထားသူတွေကို ဓာတ်ပုံနဲ့ အေအေထုတ်ပြန်၊သုံ့ပန်းလဲရေးအေအေကမ်းလှမ်း
တပ်ဘက်ကဖမ်းမိထားသူတွေကို ဓာတ်ပုံနဲ့ အေအေထုတ်ပြန်၊သ...
25 พ.ย. 2562 - 19:32 น.
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် တိုက်ပွဲအတွင်း ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က တိုက် ပွဲမှာ စစ်သုံ့ပန်း ၁၃ ဦးနဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအချို့ကို အေအေဘက်က သိမ်းဆည်းရမိ ခဲ့တယ်လို့ အဲ့ဒီဖမ်းဆီးရမိသူတွေနဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို ဓါတ်ပုံနဲ့တကွအေအေဘက်က ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး စစ်သုံ့ပန်းလဲရေးကို အေအေဘက် က ထပ်မံကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေအဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းက သံသယနဲ့ဖမ်းဆီးခံနေကြရတဲ့ အရပ်သားတွေကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် စစ်သုံ့ပန်းတွေကို ပြန်လည်လွတ်ပေးမယ်လို့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေကနိုဝင်ဘာလ၂၄ ရက်နေ့ က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သုံ့ပန်းတွေကို အလဲလှယ်ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အေအေဘက်က ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးဝှေ့တင်း ပါနိုင်မလားလို့ ဘီဘီစီက မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ လွှတ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ အေအေ တို့အကြား ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနဲ့ အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ တစ်နှစ်ဝန်းကျင်အကြာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း အေအေနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသူတွေဆိုပြီး တပ်မတော် စစ်ကြောင်းတွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံနေရတဲ့ အရပ်သားပြည်သူ ၁၅၀ လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြရတဲ့ အရပ်သားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အေအေဘက်က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ သုံ့ပန်းတွေကိုလည်း ပြန်လည်လွှတ်ပေးမှာဖြစ်သလို သုံ့ပန်းချင်း အလဲအလှယ်ပြုလုပ်လိုတယ်လို့ အေအေရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင် အရပ်သားတွေကို ပြန်ပြီးတော့ လွှတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲ အခုကျွန်တော်တို့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ စစ်သုံ့ပန်းတွေကို ပြန်ပြီးတော့ လွှတ်ပေးဖို့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဘက်ကလွှတ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်လည်း အလားတူတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်"လို့ ခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။
ဒါ့နဲ့ပတ်သက်လို့ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ နေပြည်တော် တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တို့ဆီကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့တဲ့အတွက် တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထားကို မသိရသေးပါဘူး။
သုံ့ပန်းတွေ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ အေအေဘက်နေ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိစ္စသာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာမရှိဘူးလို့ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်က ဘီဘီစီကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပလက်ဝမြို့နယ်ထဲက ၂ နေရာလောက်မှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့က ဘီဘီစီကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ တပ်မတော်ဘက်က စစ်သုံ့ပန်းတွေကို အမှန်တကယ် ဖမ်းဆီးရမိထားတာ ဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းကို အေအေဘက်နေပြီးတော့ ဖမ်းဆီးထားသူတွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တကွ နို၀င်ဘာလ၂၄ ရက်နေ့မှာထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ခိုင်သုခကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လွန်ခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့ကနေ ဘူးသီးတောင်မြို့ကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ ရွှေနဒီအမြန်ရေယာဉ်တစ်စီး ကို အေအေဘက်ကရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ခရီးသည်တချို့ကို ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကာ အဲ့ဒီထဲက တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ သုံ့ပန်းချင်းအလဲအလှယ်လုပ်မယ်လို့ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်မှာ လဲလှယ်ဖို့ ငြင်းဆိုနေတဲ့အပေါ် မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းဆီးရမိသလိုမျိုး စစ်သုံ့ပန်းတွေလည်း ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်နေရတယ်လို့ ခိုင်သုခက ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုစစ်သုံ့ပန်းလဲမယ့်အစီစဉ်မှာ ပလက်ဝ ဇာတိ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝှေ့တင်းမပါဘူးလို့လည်း အေအေဘက် ကပြောပါတယ်။
"ဦးဝှေ့တင်းကတော့ လွှတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဆက်ပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်တယ်။"လို့ ခိုင်သုခကပြောပါတယ်။
ရက္ခိုင်တပ်တော်အေအေပြောတာက ရွှေနဒီရေယာဉ်ပေါ်က ဖမ်းဆီးထားသူတွေထဲက စစ်ဘက်နဲ့သက်ဆိုင်သူ ၁၆ ဦး၊ အခု ပလက်ဝမြို့နယ် တိုက်ပွဲအတွင်းက သုံ့ပန်း ၁၃ ဦးတို့ရှိနေပြီး သူတို့ကို နိုင်ငံတကာစစ်သုံ့ပန်းဥပဒေနဲ့အညီ ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။
แฉอีก! ครู รร.ระดับท็อป ฟาดไม่ยั้งมือ ด่าเด็กไปม็อบเนรคุณ สั่งกราบเท้าขอขมา
อัลบั้มภาพ တပ်ဘက်ကဖမ်းမိထားသူတွေကို ဓာတ်ပုံနဲ့ အေအေထုတ်ပြန်၊သုံ့ပန်းလဲရေးအေအေကမ်းလှမ်း